I-China yeepatheni zentlanzi i-RPET iipesenti ezingama-100 eziRisayikilishwe zibhokisi yebhola ekhatywayo yesitayile semoto ebalekayo ephathekayo yeFesheni yomthumeli mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Ipateni yentlanzi i-RPET iipesenti ezili-100 zerisayikilisha kwibhokisi yesikhwama sezemidlalo
Izinto ezilula ukuba manzi ngaphandle kokuba ziluncedo kubomi bemihla ngemihla kunye nakwimfashini yamadoda nabafazi.Ukushicilelwa kweentlanzi kwenza ibhegi ibe yeyodlamkileyo kwaye intle.Xhasa izinto ezinobuhlobo, sizimisele ukuguqula uyilo lwakho lube yinyani!
Ubukhulu: 19L * 11W * 37Hcm Ukuvalwa: uziphu
Uncedo: Ephathekayo, yeFashoni, esebenzayo, enokuboliswa ziintsholongwane
Ukuseka ngo-2017, Changlin isityalo isebe Jiafeng Plastic Products CO., LTD eye iminyaka engaphezu kwama-20 amava iingxowa making.This ibhegi RPET 100% ivuseleleke.Izinto akukho lula ukufumana wet.Besides, iluncedo kakhulu Ubomi bemihla ngemihla kunye nefashoni yamadoda nabasetyhini.
Le patheni ye-RPET yipateni yeentlanzi ejongeka ngathi ithambile njengolwandle.
Uhlobo lwepateni yentlanzi inyusa imeko yokuthandeka.
Ubungakanani bayo yi-19L * 11W * 37Hcm enokubeka ifowuni yakho, emazantsi amanzi, izicwili, njl.
Intloko ezimbini zokutsala zilungele abantu abanomkhwa ohlukileyo.
Iinkcukacha zezinto ezibonakalayo zikubonisa ukuba umbala umnyama kancinci kwaye umbala wepateni yentlanzi uluhlaza okwenyani.
Egqithileyo Ukufihla i-RPET iipesenti ezingama-100 eziRisayikilishwe zangaphambi kwesikhwama seMidlalo ukubaleka kweBhegi ephathekayo yeFashoni yesikhwama somthunywa we-unisex
Okulandelayo: I-RPET yeeyilethi zebhegi yangokwezifiso zokuHamba ngeToiletry ezinobuhlobo ze-Eco-friendly zeengxowa zeNdalo zeKhosimethi zabafazi kunye naMadoda
Cork Natural imilo ingxowa ngeenxa zonke ukuphakheja izithambiso ...
RPET kunye noshicilelo ngokupheleleyo cosmetic ukupakisha ibhegi fl ...